Fikarohana - Keto ve ity?
Keto ve ity?
Ny vaovao rehetra izay
mila sakafo keto ianao
Efa masaka mialoha
Lasopy sy lasopy
© 2022 Keto ve ity?
Na mitady azy ireo amin'ny alalan'ny sokajy misy antsika.
Vao nanomboka ny sakafo keto ve ianao ka tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana?
Atombohy amin'ireto horonan-tsary ireto:
Inona no sakafo keto na sakafo ketogène?
Torohevitra fototra 9 hanombohana ny sakafo keto.
Azonao atao ny manitatra ny votoatin'ireto horonan-tsary ireto amin'ny lahatsoratray:
Ny sakafo keto: ny torolalana farany amin'ny sakafo ketogène ambany karbônina.
Torohevitra Keto 9 tena ilaina ho an'ny vao manomboka.
Lahatsoratra farany nampiana
Voankazo Keto: Torolàlana farany
Raha efa nihinana keto nandritra ny fotoana kelikely ianao dia mety tsy ampy voankazo. Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra fa hatramin'ny…
5 antony mahatonga ny fitondran'ny Estrogène sy ny fomba hamerenana izany
Sarotra fantarina ny fiovaovan'ny hormonina. Ny soritr'aretina dia matetika manjavozavo, toy ny havizanana na fikorontanan'ny fihetseham-po, ary matetika miova amin'ny tsingerinao...
Kombucha amin'ny Keto: Hevitra tsara ve izany sa tokony hialana?
Avelao aho haminavina. Nahita kombucha tao amin'ny fivarotanao eo an-toerana ianao ary tsy hitsahatra hiresaka momba izany ny namanao. Angamba ianao efa nanandrana izany. Ary izao dia manana…
Divay Keto: Torolàlana farany ho an'ny divay ambany karbônina tsara indrindra
Ny iray amin'ireo fanontaniana lehibe indrindra an'ny ankamaroan'ny olona rehefa manomboka ny sakafo ambany karbônina na keto dia: Azonao atao ve ny…
Keto sy Gout: Afaka manampy ny soritr'aretin'ny gout ve ny Diet Keto?
Raha mihinana hena, trondro, na hena taova ianao, dia mety hanontany tena hoe: mampitombo ny mety ho voan'ny gout ve ireo sakafo keto ireo? Ny fahendrena rahateo...
Saribao ve ny Keto Activated? Ahoana no tena fiasan'ity fanampin-javatra ity?
Maro ny olona mientanentana momba ny karbaona mavitrika. Ity fanampin-tsakafo ity dia voalaza fa manampy amin'ny fanadiovana, ny fahasalaman'ny tsinay, ny fanadiovana ny nify, ary ny maro hafa. Ireo…
Hafiriana no hidirana amin'ny ketosis?
“Mbola tsy voan’ny ketosis ve aho?” Fanontaniana mahazatra eo amin'ireo mpihinana keto izany. Ny fotoana hidirana amin'ny ketosis dia miankina amin'ny fandaharam-potoananao ...
Dibera Ghee (Dibera nohazavaina): Sakafo super tena izy sa Hoax tanteraka?
Ny ghee, fantatra amin'ny anarana hoe dibera nohazavaina, dia foto-tsakafon'ny sakafo indiana nandritra ny taonjato maro. Izy io dia ampahany lehibe amin'ny fitsaboana…
Nampiana Recipes farany
Recipe Smoothie Green Keto tonga lafatra
Maro no mihevitra fa ny fanarahana ny sakafo ketogène dia midika fa feno hena, fromazy ary dibera ny andronao. Saingy tsy mety ho bebe kokoa izany ...
Recipe mofo rahona ambany karbônina 4
Te hihinana mofo be ve ianao? Aza manahy fa tsy irery ianao. Satria ny fihinanana ketogène dia midika hoe mihinana gliosida kely kokoa, dia ...
Recipe Akoho mainty mainty 20 minitra
Ny fomba fanamboarana akoho mainty dia matetika vita amin'ny zava-manitra mainty misy siramamy ary iza no mahalala izay hafa. Ity version keto ity...
Recipe Pie Pumpkin Pumpkin Keto sy Low Carb Velvety
Rehefa manakaiky ny fialan-tsasatra, dia mety hanontany anao izy ireo hoe inona no tsindrin-tsakafo keto azonao anaovana anjara amin'ny fivoriana ho avy. Soa ihany fa ity...
Recipe Red Velvet Low Carb, Keto, ary Donuts tsy misy gluten amin'ny andron'ny mpifankatia
Fotoana hankalazana zavatra miaraka amin'ny fitiavanao ve izao? Raha tonga ny fetin'ny mpifankatia na tsingerintaona na fankalazana lehibe dia azonao atao ny manomana ...
Recipe sakafo maraina tsy misy atody Keto 18
Heverinao ve fa azo atao ve ny sakafo maraina keto tsy misy atody? Ny atody dia foto-tsakafo amin'ny sakafo ketogène. Miaraka amin'ny tavy 5 grama, 6 grama ...
Recipe Cookie Gingerbread Ketogenic tsy misy gluten tsy misy gluten
Rehefa mihodikodina ny fotoam-pialan-tsasatra dia tsy mila manadino ny mofomamy Krismasy ankafizinao ianao noho ny fihinanana sakafo ambany karbônina. ...
Keto Chicken Tikka Masala Recipe ao anatin'ny 30 minitra
Chicken tikka masala dia iray amin'ireo sakafo Indiana malaza indrindra any Andrefana. Ny fomba nentim-paharazana dia aroso miaraka amin'ny vary sy mofo naan ho ...
Sakafo nampiana farany
Keto ve ny zana-tsipìka?
Valiny: Tsy keto mihitsy ny arrowroot noho ny habetsahan'ny gliosida ao aminy. Ny arrowroot na arrowroot dia nalaina tamina zavamaniry tropikaly antsoina hoe Maranta Arundinacea. Ity zavamaniry ity dia hita tany am-boalohany ao amin'ny…
Keto Tapioca ve?
Valiny: Ny tapioka dia tsinontsinona keto. Satria manana votoatin'ny carbohydrate avo be izy io. Avo loatra, na dia ampahany kely aza dia afaka manala anao amin'ny ketosis. Ny…
Keto La Yuca ve?
Valiny: Tsy sariaka keto ny mangahazo. Indrisy anefa fa be gliosida izy io. Toy ny ankamaroan'ny anana maniry any ambanin'ny tany. Tokony hohalavirina ny mangahazo amin'ny keto…
Keto ve ny katsaka na ny katsaka?
Valiny: Ny lafarinina katsaka, fantatra amin'ny anarana hoe katsaka, dia tsy keto ary tsy manan-kery ho solon'ny lafarinina varimbazaha amin'ny sakafo keto satria…
Keto ve ny voanio?
Valiny: Misy karbônina manodidina ny 2,8g isaky ny voanio antonony, ny voaniho dia voankazo azonao hanina amin'ny keto nefa tsy be loatra…
Keto ve ny siramamy voanio?
Valiny: Ny siramamy voanio na siramamy voanio voanio dia tombanan'ny maro ho siramamy mahasalama. Saingy tsy misy keto izany satria misy…
Keto ve ny mamy tagatose?
Valiny: Eny. Tagatose dia mamy misy index glycemic 0 izay tsy mampiakatra ny tahan'ny siramamy ao amin'ny ranao ka mahatonga azy ho mifanaraka amin'ny keto. Ny tagatose...
Keto ve ny turmeric?
Valiny: Nahazo laza be teo amin'ny tontolon'ny keto ny turmeric, ary noho ny antony marim-pototra! Na dia misy gliosida aza izy ireo dia tonga miaraka amin'ny…
Keto ve ny menaka voanjo?
Valiny: Tsia. Ny menaka voanjo dia tsinontsinona keto. Izy io dia tavy voahodina izay mety hanimba ny fahasalamanao. Saingy soa ihany, misy safidy hafa…
Acai keto ve?
Valiny: Acai dia karazana voaroy izay ambolena indrindra any Brezila. Na dia misy gliosida aza dia saika fibre avokoa izy ireo ka...
Moa ve i Keto The Good Dee's Cookie Mix?
Valiny: Misy gliosida ny Good Dee's Cookie Mix, saingy azonao ampiasaina amin'ny antonony izany mandritra ny sakafo ketogène anao na ao anatin'ny ...
Valiny: Cheesy Crispy Cheese Snacks dia keto tanteraka ary tsy misy karbônina. Noho izany dia afaka mankafy azy ireo tsy misy olana ianao amin'ny sakafo ketogène anao. Ny…
Moa ve ny Adonis voasary makirana sy hanitra turmeric crunchy breziliana keto?
Valiny: Adonis Orange sy Turmeric Flavoured Crunchy Breziliana Nut Bars dia safidy tsara ho an'ny olona mihinana keto ...
Keto ve ny Adonis voanio voanio voanio mamy?
Valiny: Adonis Coconut Crunchy Pecan Bars dia tsy misy afa-tsy 2g ny gliosida. Ka amin'ny fatra kely dia azonao ampidirina ao anaty sakafo...
Keto ve ny Adonis Vanillia misy tsiron'ny voanio crunchy?
Valiny: adonis vanillia misy voanio mamy mamy dia tsindrin-tsakafo ambany-net-carbohydrate izay azo hanina kely amin'ny sakafo keto anao. ...
Keto ve ny Aneto 100% voajanahary?
Valiny: Aneto 100% Natural Meat Broth dia ron-kena feno ketogène efa masaka. Sakafo tena tian'ny vondrom-piarahamonina keto ny ron-kena taolana. Mandray anjara...
Inona no atao hoe "keto" ary nahoana?
Rehefa vita ny fianarako tany Ny sakafo maha-olombelona sy ny sakafo ara-tsakafo ao amin'ny Complutense University of Madrid tamin'ny 2014, Nanjary liana tamin'ny lohahevitra momba ny karazana sakafo tsy manara-penitra aho. Manonona azy ireo amin'ny fomba rehetra. Fa ny fahalianako amin'ny sakafo keto Nanomboka tamin'ny taona 2016 izany. Toy ny rehefa manomboka amin'ny zavatra rehetra ianao, dia nanana fanontaniana be dia be aho. Tsy maintsy nandeha nitady valiny àry aho. Ireo dia tonga tsikelikely na avy amin'ny famakiana fampahalalana mitohy (fandalinana siantifika, boky manokana, sns.) ary avy amin'ny fampiharana mihitsy.
Rehefa avy nitazona azy io nandritra ny fotoana kelikely miaraka amin'ny vokatra sasany izay toa mahagaga ahy, dia tsapako fa ny fanoloana sakafo sasany (indrindra fa ny mamy) dia nitarika ahy hanana fihinanana additives sasany ary koa andiana vokatra vaovao matanjaka be. nanomboka niseho ho an`ireo olona izay nanomboka nitondra fahasambarana sakafo keto. Mandeha haingana ny tsena. Rehefa nandinika an’ireo solon-tsakafo na sakafo manokana ireo anefa aho, dia tsapako fa tsy ny rehetra no keto araka ny voalaza, na nisy fanadihadiana ara-tsiansa izay naneho fa ny sasany amin’izy ireo dia tokony hohanina amin’ny antonony.
Noho izany dia nanapa-kevitra ny handeha hanangona azy ireo aho mba hampiasaiko manokana. Rehefa nitombo ny angon-drakitrako dia tsapako fa tena marina sy mahasoa ho an'ny olona maro izany. Ary amin'izany fomba izany no teraka esketoesto.com. Amin'ny tanjona tokana dia manana fampahalalana tsara azonao atao ianao araho ny sakafo keto amin'ny fomba mahasalama sy mahomby.
Inona no atao hoe sakafo ketogène?
Ity sakafo ity dia niainga tamin'ny taona 1920 ho fomba iray hitsaboana ny androbe amin'ny fahazazana, ary noho ny taham-pahombiazana mahagaga: ny olona mihinana sakafo keto dia niaina traikefa. eo anelanelan'ny 30% sy 40% vitsy kokoa ny fisamborana, mbola ampiasaina amin'ity sehatra ity ankehitriny.
Saingy, ahoana ny amin'ny fampiasana azy ho an'ny mponina salama amin'ny ankapobeny izay tsy mitady afa-tsy ny hampihena lanja sy hanana fiainana salama kokoa? Hodinihintsika tsikelikely ity sakafo faran'izay ambany gliosida sy matavy ity.
Ny sakafo keto dia matavy be (eo amin'ny 80% amin'ny kalôria manontolo), ambany dia ambany amin'ny gliosida (latsaky ny 5% amin'ny kaloria), ary antonony amin'ny proteinina (matetika 15-20% amin'ny kaloria). Ity dia fivilian-dàlana goavana avy amin'ny fizarana macronutrients amin'ny ankapobeny: 20% hatramin'ny 35% proteinina, 45% hatramin'ny 65% ​​carbohydrate, ary 10% hatramin'ny 35% matavy.
Ny singa manan-danja indrindra amin'ny sakafo keto dia dingana voajanahary voajanahary antsoina hoe ketosis. Amin'ny ankapobeny, ny vatana dia miasa tsara amin'ny glucose. Ny glucose dia vokarina rehefa mamotika ny gliosida ny vatana. Fomba tsotra izany, ary izany no mahatonga ny vatana hamokatra angovo.
Rehefa mihena ny karbôgria na tsy nihinana nandritra ny fotoana ela, ny vatana dia mitady loharanon-kery hafa mba hamenoana ny banga. Matetika ny tavy no loharanon'izany. Rehefa mihena ny siramamy avy amin'ny fihinanana kôbhydrate ambany dia mamoaka tavy ny sela ary manondraka ny aty. Ny aty dia manova ny tavy ho vatana ketône, izay ampiasaina ho safidy faharoa amin'ny angovo.
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny sakafo Keto?
Ny sakafo keto dia mety tsy ho mora, fa ny fikarohana siantifika dia mampiseho fa misy tombony mihoatra ny fampiasana azy amin'ny fitsaboana ny androbe, satria ny fihinanana keto dia toa mifandray amin'ny fanatsarana ny fitsaboana amin'ny:
Alzheimer: Ny siansa dia manoro hevitra fa ny mararin'ny Alzheimer izay manaraka ny sakafo ketogène dia manana fanatsarana lehibe amin'ny fiasan'ny kognita. Izany dia heverina fa misy ifandraisany amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny mitochondrial amin'ny fanomezana solika vaovao ny atidoha.
Parkinson ny: Ny iray amin'ireo singa manan-danja amin'ny aretin'i Parkinson dia ny fanangonana tsy ara-dalàna ny proteinina antsoina hoe alpha-synuclein. Ny fikarohana novatsian'ny Michael J. Fox Foundation dia nanadihady raha ny sakafo ketogène dia mandrisika ny fahatapahan'ireo proteinina ireo, mampihena ny habetsaky ny alpha-synuclein ao amin'ny atidoha.
Sclerose maromaro: tamin'ny fandalinana kely tamin'ny 2016, ny mararin'ny sclérose multiple (MS) dia nihinana keto. Rehefa afaka enim-bolana, dia nitatitra izy ireo fa nihatsara ny fiainana, ary koa ny fanatsarana ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina. Saingy mazava ho azy, alohan'ny hahitan'ny dokotera sy ny mpikaroka fifandraisana misy eo amin'ny keto sy ny sclérose multiple, dia ilaina ny santionany lehibe kokoa sy fikarohana bebe kokoa. Na izany aza, mampientam-po ny vokatra vonjimaika.
Diabetes karazana 2: Ho an'ity karazana aretina ity, mazava ho azy, ny fampihenana ny gliosida amin'ny fitenenana kely indrindra dia ny fitsipika. Izay nahatonga azy io ho fampisehoana tena mahaliana momba ny vokatra maharitra amin'ny fifikitra amin'ny sakafo keto. Raha toa ny fikarohana hatramin'izao dia natao tamin'ny santionany kely dia kely, ny porofo dia milaza fa ny sakafo faran'izay ambany-carb (toy ny sakafo keto) dia afaka manampy amin'ny fampidinana ny A1C ary manatsara ny fahatsapan'ny insuline hatramin'ny 75%. Raha ny tena izy, fanavaozana 2017 Hita fa ny sakafo keto dia mifandray amin'ny fifehezana glucose tsara kokoa sy ny fampihenana ny fampiasana fanafody. Izany dia nilaza fa nampitandrina ireo mpanoratra fa tsy fantatra mazava na noho ny fihenan-danja ny vokatra, na noho ny haavon'ny ketone avo kokoa.
cancer: Ny fikarohana andrana tany am-boalohany dia nanoro hevitra fa ny sakafo keto dia mety hisy fiantraikany antitumor, angamba noho ny fampihenana ny fatran'ny kaloria manontolo (sy ny glucose mivezivezy) amin'ny fitomboan'ny tumor. Ao anatin'ny fanavaozana 2014 Avy amin'ny fikarohana biby, ny sakafo ketogène dia hita fa miasa tsara mba hampihenana fitomboan'ny fivontosana, homamiadan'ny tsinaibe, kanseran'ny vavony y homamiadan'ny ati-doha. Mila fikarohana bebe kokoa amin'ny olombelona miaraka amin'ny santionany lehibe kokoa, saingy tena fanombohana tsara izany.
Karazana sakafo keto
Araka ny efa noresahina teo aloha, dia misy fiovaovana eo amin'ny habetsahan'ny tavy, proteinina ary kôbhydrate amin'ny sakafo keto. Izany dia miteraka karazana sakafo keto na fomba hafa hiatrehana izany. Amin'izy ireo dia hitantsika matetika:
Ny sakafo keto mahazatra (DCE): Ity no modely mahazatra indrindra amin'ny sakafo keto ary mifototra amin'ny fanjifana proteinina matavy be sy antonony. Amin'ny ankapobeny dia misy: 75% matavy, 20% proteinina ary 5% gliosida.
Ny sakafo keto avo lenta: Mitovy amin'ny sakafo mahazatra, fa misy proteinina bebe kokoa. 60% matavy, 35% proteinina ary 5% gliosida.
Ny fihinanana keto cyclical (DCC): Ity dia drafitra iray izay misy vanim-potoana misy gliosida be dia be, ohatra, mizara ny herinandro ho 5 andro keto misesy ary ny 2 ambiny amin'ny kôbhydrate.
The adapted ketogenic diet (DCA): Mamela anao hampiditra gliosida amin'ny andro handehananao fiofanana.
Na dia ny zava-misy aza dia ny keto mahazatra sy ny sakafo be proteinina ihany no manana fandalinana be dia be. Noho izany antony izany, ny dikan-teny cyclical sy adapted dia heverina ho fomba mandroso ary ampiasain'ny atleta bebe kokoa.
Amin'ity lahatsoratra ity sy amin'ny Internet amin'ny ankapobeny, mba hanamorana ny fampifanarahana, dia miara-miasa amin'ny DCE (sakafo keto mahazatra) aho.
Afaka mihena haingana ve aho amin'ny sakafo keto?
Zaza matavy aho. Azo antoka fa amin'ny fahatanoranao dia mihena ny lanja rehefa mihinjitra, hoy izy ireo tamiko. Vokany? Zatovo matavy aho tamin'izay. Nanamarika lafin-javatra maro teo amin'ny fiainako izany. Nanomboka nihena araka ny tenako aho tamin’izaho 17 taona. Izany no nahatonga ahy hianatra momba ny sakafo sy ny sakafo ara-tsakafo. Tamin'ny taona faharoa nahazoako diplaoma dia efa olona manana vatana ara-dalàna sy salama aho. Ary tena nisy fiantraikany tsara teo amin'ny fiainako teo amin'ny sehatra manokana sy matihanina izany. Iza no hino ny mpanao sakafo matavy?
Eny manakoako àry ny valiny. Raha afaka mampihena lanja amin'ny sakafo keto ianao. Tsy miresaka zavatra faran'izay mahagaga na tsy misy dikany aho. Ny fikarohana dia mampiseho fa mihena lanja ianao ary mihabetsaka kokoa, very haingana kokoa noho ny amin'ny sakafo mahazatra miaraka amin'ny haavo avo na "ara-dalàna”Ny gliosida efa misaraka, ary mampihena ny mety ho aretina sasany.
Ankoatra izany, mihena lanja ianao nefa tsy mila mandany andro amin'ny fanisana kaloria na manara-maso ny isan'ny sakafonao amin'ny fomba feno.
Ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny olona manaraka ny sakafo keto dia very lanja eo amin'ny 2.2 ka hatramin'ny 3 heny noho ireo izay manapaka kaloria sy tavy fotsiny. Ary na dia toa mifanohitra aza izany, ny triglyceride sy ny kolesterola HDL dia mampiseho fanatsarana ihany koa.
Ankoatra izany, ny sakafo keto, noho ny fitomboan'ny fihinanana proteinina sy ny fihenan'ny siramamy, dia manome tombony hafa (ankoatra ny fihenan'ny lanjany) toy ny fanatsarana ny fahatsapana insuline.
Inona no sakafo tokony hialako?
Amin'ny ankapobeny dia ireo izay manana haavo gliosida be dia be. Ohatra:
Sakafo sy zava-pisotro misy siramamy be siramamy: zava-pisotro malefaka, ranom-boankazo, smoothie, zava-mamy, gilasy, sns.
Ny voamaina, ny ankamaroan'ny lafarinina sy ny derivatives: paty, vary, voamadinika, sns.
voankazo: Ny voankazo rehetra afa-tsy ny ankamaroan'ny voaroy, toy ny frezy, mûre, goavy, plum, voaroy, Etc.
Tsaramaso na legume: tsaramaso, voanjo, voanjo, voanjo, sns.
Legioma faka sy vomanga: ovy, karaoty, ovy, sns.
Sakafo na vokatra tsy matavy: Mitandrema tsara amin'izy ireo. Matetika izy ireo no tena voahodina ary be gliosida.
Fanampiana na saosy: Tsy maintsy mijery azy ireo amin'ny fitaratra lehibe koa ianao. Satria maro amin'izy ireo no manana fatra avo be ny siramamy sy ny tavy tototry.
Tavy voky: Na dia mifototra amin'ny fihinanana tavy aza ny sakafo keto, dia ilaina ny mametra ny tavin-kena tena mahazatra ao amin'ny menaka voadio, na ny mayonnaise.
Toaka: Tena avo be ny siramamy ao aminy. Noho izany dia tsara ny manala azy tanteraka amin'ny sakafo keto.
Sakafo ara-tsakafo tsy misy siramamy: Eto koa dia mila mitandrina tsara ianao. Satria tsy ny mamy rehetra no mety amin'ny sakafo keto. Noho izany eto aho dia namakafaka ny mamy mahazatra indrindra. Mamela anao hahafantatra hoe iza no azonao hanina nefa tsy miala amin'ny sakafo.
Inona no sakafo azonao hanina amin'ny sakafo keto?
Ny sakafo keto dia ahitana:
Hena: mena, steak, serrano ham, bacon, turkey, akoho, hena hamburger, sns.
Trondro matavy: Salmon, tuna, trout, mackerel, sns.
Cheeses: Tsy voahodina voalohany toy ny cheddar, mozzarella, fromazy osy, manga.
Voanjo sy karazana voa: amandy, voanjo isan-karazany, voatavo, voa chia, sns.
Menaka tsy voahodina: menaka oliva virjiny fanampiny, voanio ary menaka avocado.
Avocado: Na manontolo na guacamole vita ho anao. Raha mividy azy ianao dia tsy maintsy manamarina fa tsy misy zavatra fanampiny.
Legioma maitso mazàna misy gliosida kely ary koa voatabia, tongolo sy poivre, sns.
Zavamaniry mahazatra: sira, dipoavatra, anana, sns.
Misakafo any ivelany nefa tsy miala amin'ny sakafo keto
Tsy toy ny karazana sakafo hafa, amin'ny sakafo keto, ny sakafo ivelan'ny trano dia tsy sarotra loatra. Saika any amin'ny trano fisakafoanana rehetra ianao dia afaka mankafy safidy tsy misy keto toy ny hena sy trondro. Azonao atao ny manafatra ribeye tsara na trondro matavy toy ny salmon. Raha miaraka amin'ny ovy ny hena dia azonao atao ny mangataka ny hanoloana anana kely tsy misy olana.
Ny sakafo misy atody dia vahaolana tsara toy ny omeleta na atody miaraka amin'ny bacon.
Ny sakafo tsotra iray hafa dia ny hamburger. Tsy maintsy esorinao fotsiny ny mofo dia azonao atao ny manatsara azy amin'ny asiana avocado fanampiny, fromazy bacon ary atody.
Amin'ny trano fisakafoanana mahazatra toy ny Meksikana dia tsy hanana olana koa ianao. Afaka manafatra hena rehetra ianao ary asiana fromazy, guacamole, ary salsa na crème marikivy.
Raha ny amin'ny hoe manao ahoana ny fisotroana ao anaty bar miaraka amin'ny mpiara-miasa sasany dia tsy hanana olana ianao. ny koky 0na Diet Coke ary koa ny soda hafa na nestea tsy misy siramamy dia keto tanteraka. Afaka misotro kafe tsy misy olana koa ianao.
Miaraka amin'izany rehetra izany, dia ho hitanao fa ny vokatra dia tsy dia manaitra toy ny amin'ny sakafo hafa. Tsy voatery ho meloka ianao rehefa misakafo satria miaraka amin'ny fiarovana tanteraka izany, afaka mahita safidy tena mahafinaritra ianao amin'ny sakafo keto anao.
Ny voka-dratsin'ny sakafo keto sy ny tokony hatao mba hampihenana izany
Tahaka ny amin'ny ankamaroan'ny sakafo, mety hahatsapa ny voka-dratsiny aloha ianao rehefa manomboka ny sakafo keto. Ara-dalàna tanteraka izany. Ny vatanao dia zatra miasa amin'ny fomba iray ary manova izany ianao. Tsy tokony hatahotra ianao. Ny sakafo keto dia azo antoka tanteraka ho an'ny olona salama tsara.
Misy miantso ireto effet secondaire ireto: ny gripa keto.
Ity antsoina hoe gripa keto ity dia matetika miteraka fihenan'ny angovo, fahatsapana fisainana tsy dia mazava loatra, fitomboan'ny hanoanana, fahasorenana amin'ny fandevonan-kanina ary fihenan'ny fahaiza-manao amin'ny fanatanjahan-tena. Araka ny hitanao izao, ny gripa keto dia tsy mitovy amin'ny fahatsapanao rehefa manomboka sakafo ianao. Maharitra andro vitsivitsy ireo voka-dratsy ireo ary tsy hita intsony.
Mba hanamaivanana ireo fiantraikany ireo, ny hevitra mahaliana dia ny fitazonana ny sakafo mahazatra mandritra ny herinandro voalohany fa ny fampidinana be ny habetsahan'ny gliosida. Amin'izany fomba izany, ny vatanao dia afaka mampifanaraka tsikelikely amin'ny fandoroana tavy alohan'ny hialana tanteraka amin'ny fihinanana carbohydrate.
Ny sakafo keto koa dia manova be ny rano sy ny mineraly ao amin'ny vatanao. Noho izany dia azonao atao ny manampy sira fanampiny amin'ny sakafonao na maka fanafody mineraly raha tianao. Ny fihinanana sodium 3.000 hatramin'ny 4.000 mg, potassium 1.000 mg ary magnesium 300 mg isan'andro dia mampihena be ny voka-dratsiny mandritra ny vanim-potoana fampifanarahana.
Zava-dehibe, indrindra eo am-piandohana, ny mihinana mandra-pahatsapanao ho voky tanteraka. Tsy misy famerana kaloria. Ny sakafo keto dia miteraka fihenam-bidy tsy misy fifehezana na famerana kaloria. Fa raha te hifehy azy ireo ianao mba hisy vokany haingana kokoa, fara faharatsiny miezaha tsy ho mosarena amin'ny voalohany. Izany dia hanampy anao hihazona azy io amin'ny fomba mahomby kokoa.
Hevitra tsara ho ahy ve ny fihinanana ketogène?
Tahaka ny amin'ny sakafo rehetra, misy ny olona izay tsy mety amin'ny sakafo keto. Ny sakafo ketogène dia tena tsara ho an'ny olona be lanja, diabeta na te hanatsara ny fahasalamany metabolika ary amin'ny ankapobeny.. Saingy tsy dia mety loatra ho an'ny atleta na olona te-hahazo hozatra na lanja be.
Ankoatr'izay, toy ny amin'ny sakafo rehetra, dia hahomby izany raha raisinao amim-pahamatorana sy tsy miovaova. Ary ny vokatra dia ho antonony - maharitra. Hazakazaka lavitr'ezaka ny fanaovana régime. Mila miadana ianao. Eritrereto tsara fa efa ela ianao no niala tamin'ny lanjanao. Tsy misy dikany (ary tsy ara-pahasalamana ihany koa) ny faniriana hamoy izany rehetra izany ao anatin'ny 15 andro.
Na izany aza, ary rehefa nodinihina ireo voalaza etsy ambony ireo, dia vitsy ny zavatra voaporofo amin'ny sakafo toy ny fahombiazan'ny fampihenana ny lanjany sy ny tombontsoa ara-pahasalamana azo avy amin'ny sakafo keto.
Efa an-taonany maro no nanoro hevitra ity sakafo ity aho. Ary toy ny amin'ny zava-drehetra, misy fisalasalana miely patrana na amin'ny fanombohana sy mandritra ny fampandrosoana izay hoezahiko hohazavaina.
Ho very hozatra ve aho?
Toy ny amin'ny sakafo rehetra, ny fihenan'ny hozatra dia azo atao. Saingy satria ny habetsahan'ny proteinina dia lehibe kokoa noho ny amin'ny sakafo ara-dalàna, ary misy ny haavon'ny ketône, dia ambany kokoa io fatiantoka io ary tsy ho zava-dehibe akory ny fanaovana lanja sasany.
Afaka miasa hozatra amin'ny sakafo keto ve aho?
Eny, fa raha ny tanjonao dia ny hampitombo ny volume, ny sakafo keto dia tsy mahomby amin'izany noho ny fihinanana carbohydrate antonony.
Afaka mihinana gliosida indray ve aho?
Mazava ho azy. Tena zava-dehibe anefa ny manapaka gliosida be dia be. Izany no tena fototry ny sakafo ary tokony ho farafahakeliny ny fihinanana azy ireo mandritra ny 2 na 3 volana voalohany. Aorian'io vanim-potoana io dia afaka mihinana gliosida ianao amin'ny fotoana manokana, fa avy hatrany dia tsy maintsy miverina amin'ny ambaratonga ambany indrindra ianao.
Ohatrinona ny proteinina azoko hanina?
Ny proteinina dia tokony hohanina amin'ny fatra antonony. Ny fihinanana be dia be dia mety miteraka insuline ary mampihena ny ketônina. Ny fetra ambony indrindra atolotra dia 35% amin'ny totalin'ny kaloria.
Mahatsiaro reraka na reraka foana aho
Azo antoka fa diso fomba fihinanana sakafo ianao na mety tsy mampiasa tavy sy ketone amin'ny fomba mety ny vatanao. Ampidino ny gliosida ary tohizo ny torohevitra nomeko teo aloha. Azonao atao koa ny maka fanafody TMC na ketône mba hanampiana ny vatanao.
Marina ve fa tena mampidi-doza ny ketosis?
Tsia mihitsy. Misy olona mampifangaro ny foto-kevitry ny ketosis sy ny foto-kevitry ny ketoacidose. Ny ketosis dia dingana voajanahary ao amin'ny vatana, fa ny ketoacidose kosa dia miseho amin'ny trangan'ny diabeta tsy voafehy tanteraka.
Ketoacidose dia mampidi-doza, fa ny ketosis izay mitranga mandritra ny sakafo ketogène dia ara-dalàna sy salama tanteraka.
Inona no ataoko raha voan'ny fandevonan-kanina sy/na fitohanana aho?
Ity effet secondaire ity dia mety hiseho rehefa afaka 3 na 4 herinandro. Raha mitohy izany dia miezaha mihinana legioma be fibre. Azonao atao koa ny mampiasa fanampin-tsakafo magnesium mba hanamaivanana ny fitohanana.
Misy fofona voankazo ny urineko
Aza manahy. Izany dia noho ny fanafoanana ny vokatra vokarina mandritra ny ketosis.
Inona no azoko atao raha sempotra aho?
Miezaha misotro rano mamy voankazo voajanahary betsaka na mitsako siligaoma tsy misy siramamy.
Mila mameno gliosida ve aho indraindray?
Tsy ilaina izany, fa mety hahasoa ny mampiditra kaloria bebe kokoa noho ny mahazatra ny andro iray.
Recipes Dessert Keto farany
Ahoana ny fomba hamoronana drafitry ny sakafo Macro Diet Keto
Recipes Keto farany
Recipe mofomamy "siramamy" tsy misy gluten, ketogène, karbônina ambany, tsy misy siramamy ary tsy misy gluten
Keto cookie crust sy crème sôkôla feno mofomamy
Recipe Keto Creamy Lemon Bars
Recipe gilasy mofomamy misy keto sy siramamy tsy misy siramamy
Recipe mofomamy mofomamy Keto
Recipe Easy Keto Squash Bars
Fampandrenesana ara-dalàna sy politika momba ny fiainana manokana
© Copyright 2022 Keto ve ity? Zo rehetra voatokana.
Ny tompon'ity vavahadin-tserasera ity, esketoesto.com, dia mandray anjara amin'ny Amazon EU Affiliate Program, ary miditra amin'ny fividianana mifandray. Izany hoe, raha manapa-kevitra ny hividy entana amin'ny Amazon ianao amin'ny alàlan'ny rohinay dia tsy misy vidiny izany fa i Amazon dia hanome anay komisiona izay hanampy anay hamatsy vola ny tranokala. Ny rohy fividianana rehetra tafiditra ao amin'ity tranokala ity, izay mampiasa ny / mividy / fizarana, dia alefa amin'ny tranokala Amazon.com. Ny logo sy ny marika Amazon dia fananan'i Amazon sy ny mpiara-miasa aminy.